तपाईलाई Umeda मा गर्नु पर्छ | Experience Japan
› ब्लग Nepali › तपाईलाई Umeda मा गर्नु पर्छ
तपाईलाई Umeda मा गर्नु पर्छ
धेरै विभाग केन्द्रमध्ये 1
Umeda, वा Kita जिल्लाकिनमेल,कि माथि शहर केन्द्र बनाउन धेरै किनमेल भवन छ। सबै भन्दा प्रसिद्ध केही Hankyu विभाग स्टोर र Daimaru विभाग स्टोर छन्। तपाईं उच्च-अन्त ब्रान्डहरु, रेस्टुरेन्ट, बारहरू र सानो पसलहरूमा सँगसँगै पाउनुहुनेछ। यी विभाग पसलहरु धेरै त यहाँ किनमेल घण्टा लाग्न सक्छ, भूमिगत स्तर सहित धेरै कथा, छ। पसल छैन केवल भनाइ छ तपाईं ड्रप सम्म, यो शाब्दिक inUmeda विभाग केन्द्र हुन सक्छ रूपमा!
2.नवीनता स्टोर लागि आँखा बाहिर
जापानी पसलहरूमा पहिले नै पर्यटकहरुका लागि नवीनता को एक अर्थमा पकड प्रस्तावित संकेत र वस्तुहरू घरमा पाइने विभिन्न हुन्राख्नुहोस्।यहाँ दिइएका क्षेत्रमा पाइने केही पसलहरूमा एक विषय वा ब्याज आधारित छन्, र यी साना रत्न फेला यति रोमाञ्चक छ। Kiddy भूमि ओसाका जापान मा सबै भन्दा ठूलो खेलौना पसल मध्ये एक छ। तपाईं फोटो र स्मृति चिन्ह को एक संग्रह लाग्न सक्छ जहाँ mascots वरिपरि हिँड्ने, घटना रिक्त छन् रूपमा निश्चित सबैभन्दा मजा छ। तपाईं आफ्नो सबै Pokemon आवश्यकता लागि ओसाका रेल स्टेशन मा एक Pokemon केन्द्र पाउन सक्नुहुन्छ। पनि यदि तपाईं प्रदर्शित हृदय मा जवान ती लागि व्यवहार हुन सक्छ हेर्न आउँदै, एक प्रशंसक छैनन्। Joshin सुपर बच्चाहरु भूमि Honten प्रशंसक निम्ति ठूलो कार्टून र Manga स्टोर छ। अन्तमा, Covo यस्तो stationaries, टेबल माल, गहने र अन्य प्यारा knick-knacks रूपमा राम्रो फ्रान्सेली पप सामान्य सामान बेच्छ।
3.अन्वेषण महान् फ्रंट
जान किनमेल र अन्वेषण महान् फ्रंट ओसाका भवन छ अर्को ठाउँमाओसाका।यसलाई पसलहरूमा र रेस्टुरेन्ट, तर पनि आवासीय अपार्टमेन्ट र होटल मात्र होइन धारण। भवन भित्र एक रोचक स्टप को पानासोनिक केन्द्र छ यो स्थान यो सूची छ। यो इलेक्ट्रोनिक ब्रान्ड यसको आफ्नै शोरूम, तपाईं हेर्न र अन्तरक्रिया गर्न लागि नवीनतम उपकरणहरू र इलेक्ट्रनिक्स बाहिर decked छ जो छ। तपाईंलाई रुचि हुन सक्छ अर्को अनुभव जापान गरेको + स्टाइल छ। निर्माण को दक्षिण भाग मा स्थित छ, तपाईं रंग सामाग्री, स्ट्रिप्स र बेल्ट को दायरा प्रयोग गरेर आफ्नै मौलिक झोला बनाउन सक्छ। यो महंगा आकार मा एक सानो छ, तर कहाँ अरू तपाईं अनुकूलन तपाईंको आफ्नै स्टाइलिश हाते झोला डिजाइन ?!
को ओसाका स्टेशन शहर4
यो स्थान बस परिवहन भन्दा प्रदान गर्न थप छ, जापान सबैभन्दा स्टाइलिश स्टेशन को रूपमा नामाकरणभ्रमण।यहाँ तपाईँले goings Umeda को मा तपाईं मान्छे तल प्रविष्ट गर्नुहोस् र आफ्नो रेल देखि छोड्न हेर्न दिनु हुनेछ ग्लास छत रूपमा अन्वेषण गर्न सक्छ। तपाईं प्रकृति समय को एक बिट खर्च गर्न चाहने हो भने पनि यो भवन ‘rooves मा धेरै उद्यान र फारमहरु छ। यसको प्रसिद्ध पानी घडी जाँच दक्षिण गेट निर्माण मा – यो दुनिया मा केवल एक हो! अन्तमा, यस ठाउँ तपाईं यहाँ दोकान आवश्यकता महसुस यदि पनि धेरै पसलहरू र रेस्टुरेन्ट धारण।
Whity Umedaमा5पसल
Whity Umedaअनुवाद हालतमा ‘को पुनर्जन्म सेतो शहर’ यो सपिङ्ग मल को Umeda जिल्ला छ र दुई सय पसलहरूमा भन्दा धारण 1987. मा जीर्णोद्धार पछि – तर यो सबै भूमिगत छ! यहाँ तपाईँले वस्त्र स्टोर, कस्मेटिक्स, जूता, आभूषण र थप पाउनुहुनेछ। केन्द्र मा एक फोहरा मामला मा तपाईं नजिकैको रेस्टुरेन्टमा रोक्न चाहनुहुन्छ सुन्दर माहौल बन्द दिन्छ।
यदिHankyu मनोरञ्जन पार्क मा रोटेपिङ् 6.Ride
एक मनोरञ्जन पार्क सपिङ्ग मल भित्र थियो कल्पना गर्नुहोस्। कि तपाईं को लागि Hankyu मनोरञ्जन पार्क हो। तपाईं भवन को बाहिर हेर्न पहिलो कुरा Hep पांच रोटेपिङ्, तपाईं ओसाका शहर को 360-डिग्री दृश्य अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ छ। भित्र, तपाईं पसलहरूमा र मनोरञ्जन सुविधा दायरा पाउनुहुन्छ। धेरै साना वयस्क, रेस्टुरेन्ट र देखा खेल कक्ष लागि आधुनिक पसलहरूमा आनन्द। तपाईं पनि छत देखि झुन्डियो एक ठूलो रातो ह्वेल समावेश जो भवन, भित्र धेरै हसाउने वर्ण पाउनुहुन्छ। त्यसैले यो सिर्फ एक मनोरञ्जन स्थान छ? यो साँच्चै सपिङ्ग मल छ? कुनै कुरा तपाईं के जवाफ पाउन, तपाईं यहाँ गएर रमाइलो छौँ!
रूपमाShitennoji मन्दिरमन्दिरमा7 लें तस्वीर
यो ओसाका को मानिसहरूलाई मूल्यवान छ यो रूपमा सुन्दर छ। Shitennoji मन्दिर जापान पहिलो बौद्ध मन्दिर थियो र यसको निर्माण यसको स्थिति धेरै धार्मिक पक्ष जोड दिन्छ, पत्रहरू समावेश र बौद्ध को चार स्वर्गीय राजा enshrining को उद्देश्य। एक स्थान व्यस्त ओसाका शहर र जापानी प्राचीन वास्तुकला प्रथम हात हेर्न मौका रूपमा आराम गर्न यस साइट, यसको आश्चर्यजनक फोटो संभावनाहरु (विशेष गरी जब यो रात समयमा रोशनी छ) को लागि यो सूची मा समावेश गरिएको थियो।
8रात मा Umeda आकाश भवन हेर्नुहोस्
रात समयमात्यहाँ Umeda आकाश भवन एक यात्रा गर्न दुई कारण छन्, र सबै भन्दा राम्रो समय यो सबै भन्दा राम्रो हेर्नछ। पहिलो कारण झुन्डिएका गार्डन, को ‘को झुन्डिएका बाबेलका गार्डन’ आधुनिक ले हेर्न छ। रोशनी र अन्य चमकीले सजावट को टावर नै जीवित देखा बनाउने, सबै वरिपरि देखिन्छन्। त्यहाँबाट, तपाईंले 360 डिग्री शोभा मा शहर देख्न सक्छौं। अन्तमा, तपाईं यो सारा भवन ग्लास बाहिर बनेको छ भने यो देखिन्छ रूपमा, आधुनिक वास्तुकला शैलीहरू र सामाग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं जो बारहरू, रेस्टुरेन्ट र क्याफे समावेश भित्र Umeda आकाश निर्माण पसलहरूमा, अन्वेषण गर्न सक्छ। तपाईं यहाँ एक प्रेम एक ल्याउन भने, तपाईंले यो भवन को माथि छोड्न हृदय आकारको padlock खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको प्रेम सदाका लागि यस रोमान्टिक गन्तव्य मा enshrined यो लक, रूपमा अध्ययन रूपमा हुनेछ।
9 जाँच गर्नुहोस् Hankyu Umeda ग्यालरी
यो एकदम अक्सर ग्यालरी परिवर्तन मा प्रदर्शन रूपमा यो सूची मा एक रोचक बिन्दु हो। कुनै पनि दर मा, Hankyu विभाग स्टोर को नवौं तल्ला मा Hankyu Umeda ग्यालरीमा एक यात्रा प्रभावित हुनेछ। अघिल्लो प्रदर्शन tastings र नमूनाहरू समावेश गर्ने ग्रेस केली व्यक्तिगत दराज वस्तुहरू, एक नर्डिक सामान प्रदर्शनी र प्रणय चकलेट एक्सपो समावेश गर्नुहोस्। मार्च 2017 को समयमा हालको प्रदर्शनी ‘: चेक गणतन्त्र गरेको Venerable Bohemian ग्लास स्टुडियो Moser’ हो। ग्लास उत्कीर्णन प्रदर्शन संग्रह बाट साथै प्रदर्शन टुक्रा हुनेछ। एक नजर छ र तपाईं केहि भयानक पाउन सक्छ!
10 को Tsuyunoten तीर्थमा तपाईंको अभिवादनभुक्तानी,
Shrinesजापान सानो पक्ष सडकमा पाउन सकिन्छ तर यो एक विश्वासीहरूको दुई धेरै विभिन्न प्रकारका देखि प्रार्थना स्वीकार गर्दछ। पहिलो एक व्यापार सम्झौता गर्नुअघि राम्रो भाग्य चाहने स्थानीय व्यवसायी छ। दोस्रो Sonezaki Shinju को सम्मान मा आफ्नो अभिवादन गर्ने तिर्न जवान प्रेमीहरूको छन्। Sonezaki Shinju एक प्ले, मान्नेहरूले सँगै र यति आत्महत्या हुन सक्छ जहाँ छैन रोमियो र जूलियट, मिल्दोजुल्दो छ। यो मानिन्छ 1703 मा यो तीर्थस्थलका मा भयो र एक जापानी playwright आफ्नो प्ले, को Sonezaki Shinju आफ्नो कहानी बताए। के तपाईं व्यापार सम्झौता वा आफ्नो वर्तमान सम्बन्ध संग सफलता चाहनुहुन्छ भने भ्रमण आउनुहोस्।
10 ठाँउहरु तपाई ओसाका बेला मिस गर्न सक्दैन ओसाका मा गर्न 10 कुराहरू जस्तै हाम्रो अन्य सूची जाँच गर्नुहोस्, र कुराहरू तपाईंले आफ्नो सिद्ध यात्रा योजना Shinsaibashi मा के गर्न छ!
ओसाकामाइकयामाइकक्याफेग्रैंडफ्लो ओसाकाहङ्कुअम्मेडाहेपफाइफफेरिसवेहेलमाईकोकुर्सीओसाका स्टेटसिटपोकमोनयूमिडायूमिडाएसकी ब्याटिङ